Socodka: Ku maaree dhuumaha iibkaaga ee Gmail Muuqaalkaan Muuqaalka ah ee CRM | Martech Zone
Socodka: Ku maaree dhuumaha iibkaaga ee Gmail Muuqaalkan CRM ee Tilmaamaha Leh
Aniga oo dhistay sumcad weyn oo had iyo jeer ka shaqeeya goobtayda, hadalkayga, qoraalkayga, wareysiyadayda, iyo ganacsiyadayda… tirada jawaabaha iyo dabagalka ee aan ubaahanahay inaan sameeyo inta badan waxay kudhacaan meelaha dillaacsan Shaki iigama jiro in aan lumiyay fursado waaweyn si fudud sababtoo ah kama aanan raacin himilada waqtigeeda.
Arrinta, in kastoo, ay tahay saamiga taabashada ee aan u baahanahay inaan uga gudbo si aan u helo ka-qaybgalka ganacsi ee tayada leh waa mid aad u ballaaran. Xaqiiqdii, waan hubaa haddii aan dabagal ku sameeyo codsi kasta oo aanan waligey helin waqti aan ku dhammaystiro shaqada macmiilka dhabta ah! Si kastaba ha noqotee, dhisida dhuun adag ayaa muhiim u ah markaad dhammaystirto mashaariicda kana guurto macaamiisha. Waa inaad si hufan ula shaqeysaa waqtigaaga… marba marka ka dambeysa taabashada rajo kasta, u qalmiddooda, iyo inaad ku horumariso habka iibkaaga.
Ganacsi kasta oo weyn wuxuu leeyahay dhuumaha wax iibinta ee wax ku oolka ah halkaas oo ay ku aqoonsadaan marxaladda ay rajadoodu ku jirto, yaa ugu dhow xiritaanka, iyo awoodda saadaalinta awooda ay u leedahay inay xirto oo ay kobciso ganacsiga. Tani waa igu cabsi aniga mana aaminsani in xaaladdaydu tahay mid gaar ah. Waxaan aaminsanahay in ganacsiyada yar yar badankood ay la halgamayaan maaraynta dhuumaha iibkooda iyo inay si wax ku ool ah u qalmaan oo ay u qalmaan hogaaminta. Gaar ahaan markay yihiin kuwo aan si xirfad leh u tababaran oo xirfadlayaal iib ah xilliyeed.
Tani waa halka a Maamulka Xiriirka Macaamiisha (CRM) nidaamku waa baahi. CRM, waxaad ku calaamadeyn kartaa rajooyinkaaga, waxaad ku hayn kartaa qoraallo iyaga ku saabsan, waxaad ku garan kartaa heerka wareegga iibka ee ay ku jiraan, abuuri karaan hawlo dabagal ah, iyo si wax ku ool ah u maareeyaan xiriirradaada ganacsi. Iyo… haddii ururkaagu xubno badan leeyahay, waxaad si wax ku ool ah ula tacaali kartaa gacan-ka-hadal iyo dib-u-beddel u dhexeeya shaqaalahaaga.
Socodka: Ku Maaree Dhuumaha Iibintaada Gudaha Gmail
Isku habeynta iyo maamulida xirmo kale oo softiweer ah oo tan lagu sameeyo waa shaqo badan, oo aan ka yarayn. Inta badan hawshu waxay ku dhacdaa emayl, sidaas darteed yeelashada CRM oo ku dhex milmeysa barxadda emailkaaga waa shardi ku saabsan fudeyd iyo hufnaan. Haddii meheraddaadu shaqeyneyso Google, Isku xigta waxay noqon kartaa xalka kuugu habboon.
Streak wuxuu si toos ah ula midoobayaa sanduuqaaga Gmail, wuxuu leeyahay fiilooyin kumbuyuutar ah, wuxuuna leeyahay codsi moobil aad u fiican. Tilmaamaha Streak waxaa ka mid ah:
CRM isku dhafan - wax kasta oo aad u baahan tahay si aad u hesho "la xiray" ayaa ku qarsoon email-kaaga. Streak wuxuu qabtaa heshiisyadaada wuxuuna ku fidinayaa Gmail-ka jira mid jilicsan oo si buuxda u muuqda oo CRM ah.
Habee Nidaamka Iibkaaga - Marka istiraatiijiyadda iibkaagu isbeddesho, cusbooneysiinta Streak waa mid deg deg ah oo dareen leh. Kudar khaanad cusub nooc kasta ha noqotee, dib u habeyn ku sameyso marxaladaha, ama masax xogta waqti kasta. Tiirarka waxaa si gaar ah loogu talagalay inay aqbalaan tirooyinka, qoraalka qaab-bilaashka ah, menusyada hoos loo dhigo, sanduuqyada, iyo wax kasta oo kale oo aad u baahan karto.
Iib Wada shaqeyn - Dhammaan wada-hawlgalayaasha fursadda wada ayaa akhrin kara emayllada oo buuxa xitaa haddii aan lagu darin dunta. Waxaad sidoo kale xakameyn kartaa gelitaanka xogta dhammaan xubnaha kooxdaada adiga oo adeegsanaya doorar ogolaansho.
Guddi sanduuqa - xafid qoraalada, u xilsaar hawlaha iyo dabagalka midig guddi si wacan isugu dhafan adoo adeegsanaya fiilooyinka biraawsarka Streak ee loogu talagalay Chrome ama Safari.
Qeybaha Emailka - Gali qoraal badanaa soo noqnoqda oo leh amarka muhiimka ah. Si dhakhso leh u qor isbarasho dhammaystiran, dabagal, iyo xusuusin. Ka takhalus waqtiga lumay iyo qallafsanaanta soo noqnoqotay.
Raadinta Emailka - Raadinta ayaa ku ogeysiin doonta goorta, meesha, iyo inta jeer ee emaylka la arko. Isticmaal xariiq 'Streak' si aad ugu wacdo hoggaanka xilliga saxda ah ee ay kaa fikirayaan.
Farriinta Midawga - Streak wuxuu ciribtirayaa dhibaatada e-maylka. Qor fariintaada, xulo liiska dadka qaata, oo dir.
Warbixinta Dhuumaha - Abuuritaanka jaantusyo iyo jaantusyo midabo badan leh ayaa ku fududaan Streak. Eeg sida lacagtu u dhex marto dhuumahaaga iyo kuwa wax ku darsaday ee saameynta ugu weyn ku leh.
Saxiix u istaag Streak
Shaacinta: Waxaan ku xirnahay Isku xigta oo waxaan u adeegsanayaa xiriirinteyda ku xiran maqaalkan.
Tags: app iyo appandroid crmplugin browserplugin chromeCRMmaamulka xiriirka macaamiishadaba-Gmailgmail crmraadinta gmailGoogle Suitegoobta shaqada googlemacruufka appmacruufka crmshaqada loo dhiiboshahaadada hogaamintameerisku isku darsamodhuuntarajooyinkordhinta safaridhuumaha iibkaIsku xigtahawlahaiibinta kooxda
Sida loo Dhiso Dhaqan Xog-wade ah si loo Kordhiyo khadka hoose ee Shirkaddaada